EasyJet ụgbọ elu: Ugbu a na-efega Jordan, Egypt na Morocco site na ntọala Italiantali
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » EasyJet ụgbọ elu: Ugbu a na-efega Jordan, Egypt na Morocco site na ntọala Italiantali
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Akwụkwọ akụkọ Italy • Akụkọ na -agbasa na Jordan • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Jgbọ elu EasyJet na-ebupụta ụzọ 9 ọhụụ jikọtara totali na North Africa na Middle East site na ntọala ya na Milan Malpensa, Venice, na Naples.
Na oge mbụ ịmalite mgbụsị akwụkwọ na-esote, ụlọ ọrụ ahụ ga-ejikọ Italytali na Jọdan na ụgbọ elu ndị dị n'etiti Milan Malpensa na Venice gaa Aqaba-Petra, otu n'ime ihe ịtụnanya asaa nke ụwa.
Njikọ a ga-arụ ọrụ site na Ọktọba 27, yana ugboro abụọ kwa izu na Wednesday na Sunday site na Milan, site na Venice, ugboro abụọ n'izu na Tuesday na Saturday, malite na October 2.
Njikọ gaa Egypt site na Milan Malpensa na Venice ga-emeziwanye, yana iwebata Marsa Alam site na ntọala abụọ ahụ, ụgbọ elu ọhụrụ ahụ gaa Hurghada site na Venice na nkwenye nke njikọ oyi na Malpensa.
E nwekwara ozi banyere Morocco nwere ụgbọ elu ọhụrụ na Agadir si Milan Malpensa na iwebata Marrakech site na Venice.
Njikọ dị n'etiti ugwu ọwụwa anyanwụ nke andtali na United Kingdom na-abawanye na ụgbọ elu ọhụrụ dị n'etiti Verona na Manchester.
Ntinye ego ohuru na-abanyekwa na ndịda na njikọ ọhụrụ dị n'etiti Naples Capodichino na Hurghada, na-abawanye onyinye nke oge ezumike site na isi obodo Campania.
Njikọ a ga-arụ ọrụ malite na Ọktọba 29 na ugboro abụọ-izu, Tuesday na Satọde.